Monday March 08, 2021 - 11:55:04 in Wararka by Xarunta Dhexe
Dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed, istiraatiijiyadeed iyo kuwa ganacsi ayaa ka soo dhacaya mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan adduunka ee xannibmay: Badda Cas Bilowgii sanadka 2020, wadamada geeska iyo khaliijku waxay isugu yimaadeen caasimada sucuudiga ee riyaad si ay u bilaabaan golaha cusub ee dawladaha carabta iyo africa ee bada cas iyo gacanka cadmeed.
Wufuud ka socota Soomaaliya, Jabuuti, Eritrea, Suudaan, Masar, Urdun iyo Yemen ayaa goobjoog ka ahaa. Waxaa kulanka ka maqnaa Itoobiya.
Sacuudi Carabiya waxay dib u xaqiijineysaa awoodeeda gobolka si ay uga jawaab celiso saameynta sii kordheysa ee Turkiga iyo Iran. Dagaalkii canshuuraha ee Mareykanka iyo Shiinaha wuxuu sidoo kale fursad u ahaa gobolka inuu isugu yimaado calanka iskaashiga iyo dhinacyada badan, in kasta oo laga reebay ciyaartoy muhiim ah.
READ MORE AKHRISO Abiy Ahmed: Oo Loogu Talo Galay Amarka Nabadeed ee Geeska Afrika
Waxaa jira dano badan oo ay daneynayaan dowladaha Afrika iyo Khaliijka ee Badda Cas, laakiin sidoo kale ciyaartoy caalami ah sida Mareykanka, Shiinaha, Jabbaan, Hindiya, Turkiga, Faransiiska, Koonfur Afrika iyo Midowga Yurub. Ay isa iyo is burinaya gool noqon kartaa caqabado waaweyn ku abuuritaanka nidaamyo-gal iskaashi iyo maaraynta dhibaatada Badda Cas.
Masar, oo ah quwade taariikh leh, ayaan mar dambe ku raaxeysanayn awooddaas isugu yeertay inay dejiso shuruudaha iskaashiga Afrika iyo Khaliijka. Bangiga bari ee Badda Cas wuxuu sidoo kale wajahayaa xasillooni darro iyo kala-guurno adag. Arimaha ugu waawayn waxaa kamid ah: dagaalka Yemen, loolanka wadamada khaliijka, hoos udhaca dhaqaalaha ee kiciya inta badan qiimaha saliida oo burbura, iyo jagooyinka looqaadayo aqoonsiga Israel.
AKHRISO DHEERAADKA deynta Afrika: Maxaa laga daawan doonaa 2021
Ku soo toos waxyaabaha muhiimka u ah xulashada Tafatiraha.
Sidoo kale dalab ka hel Warbixinta Afrika
Sidoo kale hel dalabyada la-hawlgalayaasha The Africa Report
Xeebta Soomaaliya waa midda ugu dheer qaaradda waxayna sameysaa marin u dhexeeya Badweynta Hindiya iyo Badda Cas, kana soo baxa ilaa badda Miditereeniyanka. Waxay awood u leedahay inay noqoto xarun caalami ah oo weyn.
Laakiin sanado badan oo colaado, dagaal, argagixisanimo, saboolnimo iyo macluul ah ayaa raadkoodii ku reebay dalka, taasoo ka dhigaysa mid daciif ah oo markaa u nugul saameynta dibada. Turkiga waa mid ka mid ah awoodaha ku guuleystey in ay cago adag ku yeeshaan Soomaaliya iyada oo ah dalka ugu weyn ee bixiya gargaarka, maareynta kaabayaasha muhiimka ah ee dekedda iyo garoonka diyaaradaha iyo taageerida militarigiisa.
Maqaalka ayaa hoosta ka sii socda
Hel PDF-kaaga bilaashka ah: Bangiyada ugu sareeya 200 2019
SOO DEGSO BILAASH AH
TARTANKA SI LOO BEDDELO
Buuxi foomka oo soo dejiso, bilaash, waxyaabaha muhiimka ah ee ka soo baxa Warbixinta Gaarka ah ee Warbixinta Afrika ee 200 ee bangiyada Afrika ee sannadkii hore. Kusoo hel PDF-gaaga bilaashka ah adoo buuxinaya foomka soo socda
Dhinaca kale Jabuuti waxay heshay dariiq kale oo ay iskaga ilaaliso hore iyo bartanka halka wadamada deriska la ah ay wali ku taagan yihiin faraha lugaha iyadoo martigalisay saldhigyo milatari oo dhowr ciyaartoy ajnabi ah.
READ MORE doorashada Soomaaliya ayaa dib u madaxweynenimada: Top 7 arrimaha si dabagal
"Annagu saliid ma lihin, laakiin waxaan leenahay fikrado," ayuu yiri madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle dhawaan. Jabuuti waxay horey u sii waday qorshayaasheeda si ay u noqoto xarun goboleed weyn. Laakiin taasi ma ahayn iyadoo aan cillado la soo saarin. Sida dariskeeda ah, Jabuuti waxay deyn badan ku ururtay Shiinaha, oo ay weheliso martigelinta Shiinaha ee saldhigga milatari ee keliya ee dibadda.
Dekedda Ereteriya ee Assab waxay martigelisaa saldhigga ciidamada badda ee Imaaraatka, taas oo sare u qaadaysa joogitaanka militariga Sacuudiga ee gobolka. Bilowgii sanadka, Imaaraadku wuxuu eegay inuu ku daro saldhig kale oo militari, kaas oo ku yaal Somaliland Berbera, laakiin markii dambe waa la joojiyay.
AKHRISO DHEERAAD Geeska Afrika iyo Gacanka: Awood wareejinta ayaa ka ciyaareysa Badda Cas
Bishii Janaayo 2020, hoggaamiyaasha Ereteriya, Soomaaliya iyo Itoobiya waxay soo jeediyeen in la sameeyo urur goboleed cusub, 'Iskaashiga Geeska Afrika'. Ururka ayaa wax ka qaban kara arrimo dhowr ah oo muhiim ah ganacsiga xuduudaha isaga gudba iyo deegaanka. Itoobiya oo aan bad lahayn, waxay sidoo kale u furi kartaa marinno cusub oo marin looga soo galo badda. Madaxweynaha Ereteriya Isaias Afwerki ayaa riixay midowga isagoo isha ku haya kor u qaadista sumcadda Asmara. Ujeeddadeedu waxay tahay inay noqoto quwad goboleed la tartanta xarunta dhexe ee IGAD ee xarunteedu tahay Jabuuti.
23/07/2018 - 14:31:20
27/08/2016 - 21:51:52
27/08/2016 - 15:27:10
26/08/2016 - 20:13:32